Home Wararka Gudaha Taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ‘oo diiday inay u hogaansamaan’ baaqiisa
Dhanka kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku socda weerar iyo been abuur oo ay wadaan kooxo NN ah oo taageera Madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxay ahayd in ay baaqa hoggaamiyahooda (madaxweynihii hore) ay maqlaan ee dowladdaan 2-da bilood aan gaarin ay qunjuraafka ka daayaan.”
Waxay ahayd inay kala dhuuntaan waayo iyaga fashilay guri muraayad ahna ku jira. Kuwa wada dagaalka beenta ku salaysan waxay keenaysaa in sidii gabyaagii Carbeed ee Jariir lagu yiraahdo فَغُضَّ الطَرفَ إِنَّكَ مِن نُمَيرٍ.”
Previous articleIsbarbadhigga badeecadaha ay Soomaaliya dhoofiso iyo waxa loo soo dhoofiyo
Next articleGuddoomiye Ku-Xigeenka Golaha Shacabka Oo Maanta Gaartay Garoowe & Ujeedka